Tatitra vaovao momba ny fironan’ny fahalalahan’ny aterineto manerantany any Torkia sy Kaokazy atsimo · Global Voices teny Malagasy
Ampilaharin'ny tatitra ny zon'olombelona amin'ny sehatra ankihy amin'ny firenena 70
Voadika ny 17 Oktobra 2021 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, Português, English
Pikantsary avy amin'ny Freedom House Sarin-tany mampiseho ny fahalalahan'ny aterineto.
Namoaka ny andiany farany amin'ny tatitra mikasika ny Fahalalahan'ny Aterineto tamin'ny 21 septambra lasa teo ny Freedom House, kiadin'ny zon'olombelona. Namintina ny tatitra fa “nihena tao anatin'ny 11 taona nifanesy ny fahalalahan'ny aterineto manerantany.” Manombana ny toe-draharahan'ny zon'olombelona amin'ny sehatra ankihy manerana ny firenena miisa 70 ny tatitra. Inona avy ireo fehin-kevitra avy amin'ny tatitra momba an'i Torkia, Georgia, Armenia, ary Azerbaijan? Hojerentsika akaiky kokoa izany.
Eto ny➡️ #Fahalalahan'ny aterineto 2021: Hetsika manerantany hanaraha-maso ny teknolojia goavana
Nihena tao anatin'ny 11 taona nifanesy ny fahalalahan'ny aterineto.
🧵 amin'ny fikarohana lehibe hitanay
Georgia: misy fahalalahana
Nofintinin'ilay tatitra vaovao fa na dia nisy aza ny ezaka nataon'ireo firenena Kaokazy atsimo tamin'ny fahalalahan'ny Aterineto, dia mbola olana hatrany ny fandisoam-baovao. Nahazo isa 77 tamin'ny 100 i Georgia, ka nahazo ny laharan'ny lisitra “malalaka” izy tamin'izany.
Nihatsara ny fahalalahan'ny Aterineto tany Georgia, noho ny tsy fisian'ny fisamborana amin'ny voalaza fa mifandraika amin'ny hetsika ataon'ny olona an-tserasera. Na izany aza, fanamby marobe mifandraika amin'ny isan'ireo fanafihana amin'ny aterineto sy fanodikodinana votoaty anatiny no voamarika nandritra ny fotoanan'ny fanaovana tatitra.
Armenia: misy fahalalahana
Nametraka an'i Armenia ho “malalaka” ny tatitra 2021, ary nahazo isa 71 tamin'ny 100 ny firenena, na eo aza ny fameperana ataon'ny governemanta amin'ny fizotram-baovao nandritra ny ady mitam-piadiana nifanaovana tamin'i Azerbaijan tamin'ny taona 2020.
Nametraka fetra lehibe amin'ny fahafahan'ny fampitam-baovao mitatitra ny ady ny fampiharana ny lalàna miaramila tamin'ny faran'ny volana Septambra 2020, anisan'izany ny fandraràna ny fitenenana izay heverina fa mampidi-doza ny filaminam-pirenena, ka mamela ny manampahefana hitaky ny fanesorana votoaty, ary hampandoa onitra raha misy ny tsy fanarahan-dalàna. Tranonkala Tiorka sy Azerbaijaney maromaro mitondra vala .az sy .tr no tsy azo nidirana nandritra ny herinandro maromaro. Nitatitra ny olana amin'ny fidirana tamin'ny TikTok ihany koa ireo mpisera. Niatrika fanafihana ara-teknika ihany koa ireo tranonkalam-baovao malaza, ao anatin'izany ny fanafihana DDoS, ka nahatonga ny maro tamin'izy ireo tsy azo nidirana vonjimaika nandritra ny fifandonana.
Azerbaijan: tsy misy fahalalahana
Taona fahatelo, tamin'ny laharana “tsy malalaka” no nisy an'i Azerbaijan tamin'ny tatitra manerantany. Nosakanan'ny governemanta ny fidirana tamin'ny Aterineto nandritra ny 44 andro tamin'ny herintaona, raha nifanditra tamin'i Armenia noho ny faritany Nagorno Karabakh i Azerbaijan.
Nampiasa teknolojia fanaraha-maso mitsikilo ny olom-pirenena ihany koa ny firenena, ao anatin'izany ny Pegasus, novokarin'ny orinasam-panaraha-maso ny aterineto NSO Group. Nasongadin'ity tatitra ity ny fomba niarahan'ny Delta Telecom, mpamatsy tolotra aterineto niasa tamin'ny Sandvine, orinasa iray any Canada, hametraka ny teknolojia antsoina hoe Deep Packet Inspection hanakanana ny fandefasana mivantana amin'ny YouTube, Facebook, ary Instagram. Nampiasa ny teknolojia Deep Packet Inspection i Azerbaijan nanomboka tamin'ny taona 2009 farafahakeliny, araka ny tatitra niarahan'ny Fiaraha-miasa Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona sy ny Fanaraha-maso ny aterineto ao Azerbaijan namoaka tamin'ny fiandohan'ny volana Septambra.
Torkia: tsy misy fahalalahana
Ao Torkia, nahatonga ny firenena ho tafiditra amin'ny laharana “tsy misy fahalalahana” ny fitontonganan'ny fahalalahan'ny aterineto amin'ny ankapobeny tamin'ny taona fahatelo satria nahazo isa 34 amin'ny 100 izy.
Nitohy nijotso nandritra ny taona fahatelo nifanesy tao Torkia ny fahalalahan'ny aterineto. Nandritra ny fotoana nanaovana tatitra, tranonkala an-jatony maro no voasakana, araka ny lalàna vaovao mifehy ny tambajotra sosialy, amin'ny tranga sasany. Nesorina tamin'ny tranonkala sy ny sehatry ny tambajotra sosialy ny votoaty an-tserasera noheverina ho mitsikera ny antokon'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana (AKP) na ny filoha Recep Tayyip Erdoğan, ary nahazo fandrahonana ara-batana sy an-tserasera ireo mpikatroka an-tserasera, mpanao gazety ary mpisera ny tambajotra sosialy noho ny lahatsoratra tao amin'ny tambajotra sosialy. Nosamborin'ny manampahefana ireo mpisera ny sehatra anjotra Clubhouse ho setrin'ny fanoherana notarihin'ny mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Boğaziçi, nikendry ireo mpikatroka LGBT + an-tserasera izy ireo, ary nisambotra tompon'andraikitra malaza iray ao amin'ny antoko mpanohitra noho ny filazana fa nanala baraka ny filoha. Nisy ny raharaha heloka bevava nanamelohana ireo nandefa fanehoan-kevitra manaraby tao amin'ny media sosialy, ary nampiasaina ny fandrahonana amin'ny fanaraha-maso an-tserasera, ny fanorisorenana, ary ny sazy ho an'ny heloka bevava mba hanaovan'ireo mpisera ny aterineto fanivanan-tena any Torkia. Nametraka ny sivana ho ara-dalana tao amin'ny firenena ny fiparitahan'ny lalàna fameperana.
Raha niresaka tamin'i Bianet dia nilaza ny mpanoratra ny tatitra, ny Ivotoerana Eoropeana misahana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana ho an'ny fampitam-baovao fa: “Ny hetra vaovao na ny fiakaran'ny hetra, ny famerana ny fidirana, ny famafana ny votoatim-baovao, ny fahaizana manidy ny fidirana amin'ny sehatra iray manontolo, ary indrindra indrindra ny fitazonana na fisamborana ny olona izay maneho ny fahalalahany maneho hevitra noho ny fanakianan-dry zareo amin'ny aterineto, sy ny faharesen-dahatry ny sasany amin'izy ireo, dia mampiseho fa mbola lavitra ny lalan'ny fahalalahana amin'ny aterineto ao Torkia.”
Notontosaina arakaraka ny valin'ny andiam-panontaniana miisa 21, izay nozaraina ho zana-panontaniana efa ho 100 amin'ny fitambarany ny filaharana amin'ny fahalalahana amin'ny aterineto sy ny isa azo. Nozaraina ho sokajy telo ny tatitra, ao anatin'izany ny sakana amin'ny fidirana, famerana amin'ny votoaty, ary ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpisera.